I-china iAluminium ingxubevange yezixhobo ze-elektroniki izinto zomenzi kunye nomthengisi | DOWODA
IAluminiyam ingxubevange yezixhobo zombane
Igama lemveliso Izixhobo ze-elektroniki zeAluminiyam Uhlobo lwemveliso Udidi lwedijithali
Iqhubekekisa iindlela Ukulungiswa kwesiko Uhlobo lokuqhubekekisa Umatshini wokugaya we-CNC
Umjikelo wobungqina Iintsuku ezi-3-7 Ukuchaneka ukugqiba
Inkqubo yokuqhubekeka Iintsuku 10-15 Ubuninzi bephezulu 500mm
Uburhabaxa bomhlaba 0.2 Obona bude buphezulu I-1500mm
Unyango oluphezulu Ukuxutywa Ukunyamezelana kwemveliso 0.01mm
Izinto zokwenza ialuminiyam
Ukusetyenziswa kweMveliso Izixhobo zekhamera yedijithali
Ukusombulula ingxaki kumatshini wokuhamba we-CNC:
Inkqubo yohlalutyo lweziphene zombane ikwayinkqubo yokusombulula ingxaki. Ke ngoko, ezinye iindlela eziqhelekileyo zokusombulula iingxaki zombane ziye zaziswa ngokubanzi kwezi ndlela zohlalutyo zilapha ngasentla. Ngoku, kudweliswe iimpazamo ezininzi zombane.
1. Ukunikezelwa kwamandla Ukunikezelwa kwamandla ngumthombo wamandla ekusebenzeni ngokuqhelekileyo kwenkqubo yokugcinwa kunye nomatshini wokuhamba we-CNC wonke. Ukuba iyasilela okanye impazamo incinci, iya kuphulukana nedatha kwaye ibangele ukuvalwa. Kwiimeko ezinzima, inokutshabalalisa inxenye okanye yonke le nkqubo.
Amazwe aseNtshona anamandla awaneleyo kunye nomgangatho ophezulu wegridi, ke ngoko inkqubo yoyilo lwamandla abo yokuqwalaselwa incinci. Oku akonelanga kuthungelwano lokubonelela ngombane ngokutshintsha okukhulu kunye ne-harmonics ephezulu eTshayina. Izinto, ayinakuphepheka ukuba kuya kubakho ukusilela okubangelwa kukunikezelwa kwamandla. Kuya kufuneka sizame konke okusemandleni ethu ukuyila inkqubo yokuhambisa umbane ye-CNC umatshini wokuhamba osisiseko:
Bonelela ngebhokisi yokuhambisa ezimeleyo ngaphandle kokusebenzisa uthotho nezinye izixhobo;
A Kukho umhlaba olungileyo ekuqaleni konikezelo lwamandla;
As Iindawo ezinomgangatho ophantsi wokubonelela ngombane kufuneka zixhotyiswe ngezixhobo ezithathu zokuzinzisa amandla ombane we-AC;
Layout Ubeko lwezinto zombane kwikhabhathi kunye nokubekwa kweentambo ze-AC kunye neDC kufuneka zibekelwe bucala.
Supply Ukunikezelwa kwamandla kwinqanaba lesithathu lokungena kumatshini wokuhamba we-CNC kufuneka amkele inkqubo yeentambo ezintlanu, kwaye ukungathathi hlangothi (N) kunye nomhlaba (PE) zahlulwe ngokungqongqo;
2.) Indawo yokuma kwenkqubo yokuhamba ye-CNC ayilunganga
Indawo yokuma kwe-alamu. Kungenzeka ukuba indawo yokulinganisa indawo ivulekile; umlinganiso wonakele; isinxibelelanisi somqondiso esimiselwe ngolawulo lwendawo asikho.
I-axis yokulungelelanisa ihamba ngaphandle komyalelo. Kungenzeka ukuba ukukhukuliseka kukhulu kakhulu; I-loop isikhundla okanye isantya loop iqhagamshele ingxelo entle; iintambo zengxoxo zivulekile; into yokulinganisa Iziqwenga zonakele.
3. Indawo ye-zero yokulungelelanisa umatshini wokuhamba we-CNC ayifumaneki. Kungenzeka ukuba icala elingu-zero likude kakhulu kunqaku le-zero; i-encoder yonakele okanye i-wiring ivuliwe; Inqaku le-zero nothango litshintshiwe;
Isantya sokutshintsha asiphumelelanga.
4. Iimpawu eziguqukayo zomatshini osisiseko we-NC ziya zisiba mbi, umgangatho wobugcisa uyancitshiswa, kwaye umatshini osisiseko udlidliza ngesantya esingaguquguqukiyo. Zininzi ezi-uhlobo lunokuba lukhona
Umsantsa wenkqubo yothumelo loomatshini mkhulu kakhulu okanye sele ugugile, okanye umzila kaloliwe awuthanjiswanga ngokwaneleyo okanye awugugi; inokuba sisantya sokukhawulezisa inkqubo yolawulo yombane
Indawo yokuma kunye neeparameter ezinxulumene nayo azisekho kwimeko efanelekileyo, kwaye kufuneka zilungiswe kwakhona emva kokuba isiphoso soomatshini sisuswe.
5. Ukungaphumeleli ukuvala amaxesha ngamaxesha. Kukho iimeko ezimbini ezinokubakho apha: -Imeko enye kukuba ingxaki kwisoftware enxulumene nayo
Ukusilela kokuvala phantsi kokudityaniswa kokusebenza kunye nokusebenza kokusebenza kuya kuthi shwaka emva kokuba umatshini osisiseko we-CNC unikwe amandla emva kokuba ucinyiwe umbane; enye imeko ibangelwa ziimeko zokusingqongileyo
, Njengophazamiseko olomeleleyo (iigridi okanye izixhobo zepheripheriya), ubushushu obugqithisileyo, ukufuma okugqithileyo, njl.
Umatshini wengqondo ubekwe kwisakhiwo esiqhelekileyo somzi-mveliso okanye kufutshane nendawo enkulu evulekileyo "], kwaye ikhabhathi yombane ivuliwe ixesha elide, kwaye zininzi izixhobo ezinjengothuli olunemveliso, ukucheba isinyithi, okanye inkungu yamanzi kufutshane.
Yima. Ezi zinto azizukubangela ukusilela kuphela, kodwa ziya konakalisa kakhulu inkqubo yomatshini wokuhamba. Qiniseka ukuba unikele ingqalelo kuphuculo.
Egqithileyo Izixhobo zokunxibelelana ngeAluminiyam
Okulandelayo: Izixhobo zensimbi zeshidi
Cnc Ukwenziwa kwesiko
Cnc Izahlulo Ukwenziwa ulwenziwo
Cnc Imveliso encinci yeBatch
Cnc Machining Special-Waxonxa
Umatshini omkhulu weCnc
Sheet yesinyithi isisu semoto
CNC umfuziselo processing processing kwakhona ha ...
Amalungu e-aluminium angaqhelekanga
CNC aluminium ingxubevange processing ngesandla kwakhona ...
5 Axis Cnc Lathe, Cnc Stainless Ukwenziwa, Cnc Precision Izahlulo Ukwenziwa, Inkqubo yeBhodi yeCnc, Cnc Machining Centre Ukwenziwa, Oomatshini beShell,